सरकारले साउन १५ गतेदेखि होटल, रेस्टुरेन्ट सेवा सञ्चालन गर्न दिने – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सरकारले साउन १५ गतेदेखि होटल, रेस्टुरेन्ट सेवा सञ्चालन गर्न दिने
काठमाडौं । गएको चार महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण ठुलो क्षति व्यहोर्न वाध्य होटल तथा पर्यटन व्यवसायका लागि सरकारले राहत दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसार साउन १५ गतेदेखि होटल, रेस्टुरेन्ट सेवा सञ्चालन गर्न दिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले होटल, रेस्टुरेन्ट खुला गर्ने तर सामूहिक भोज, पार्टी, सेमिनार गर्न नपाइने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै हिउँदे सिजनको पर्यटन व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर पर्यटनसँग सम्बन्धी ट्रेकिङ, ट्राभल, पर्वतारोहण एजेन्सी खुल्ने, बुकिङ सुरु गर्न दिइने भएको छ ।
‘नेपालमा लकडाउन अन्त्य’
काठमाडौं / नेपालमा चैत ११ देखिकाे लकडाउन अन्त्य भएकाे छ ।सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि लगाएको लकडाउन अन्त्य भएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले चैत ११ देखि सरकारले लगाएको लकडाउन अन्त्य भएको जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा संचालन गर्न अनुमति दियाेकाठमाडाैं । सरकारले शैक्षिक संस्थाहरुलाई विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा संचालन गर्न अनुमति दिएकाे छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता युवराज खतिवडाले लामो समय बन्द रहेको विद्यालयहरु भने बन्द नै रहने तर भदौ १ गते बाट विद्यार्थी भर्ना र परीक्षाको तयारी गर्न भने सरकारले छुट दिएको बताए ।
यस्तै, सरकारले होटल, रेष्टुराँ खोल्न अनुमति दिएको छ। तर त्यहाँ सामुहिक भोज, ठूलो समूहमा भेला भने हुन भने पाइने छैन। सरकारले लुज लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै शैक्षिक संस्था, प्रदर्शनी, भेला, पार्टी प्यालेस, जिम खाना, धार्मिक र सामाजिक स्थल अर्को मिति नभनेसम्म बन्द रहने जनाएको छ ।